Olee otú Download Wondershare MobileGo for Android App
> Resource> égwu> Olee otú Download Wondershare MobileGo App-ejighi eriri
Otu ihe i nwere ike na-enweghị echiche bụ na desktọọpụ Android manager - Wondershare MobileGo ga-ahụ na ụlọ ọrụ nke MobileGo.apk faịlụ. Oge mbụ mgbe ị na-agba ọsọ a desktọọpụ Android njikwa Mgbe ejikọta gị gam akporo ngwaọrụ site na eriri USB, ọ ga-akpaghị aka wụnye MobileGo.apk faịlụ na gị android ngwaọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na nke a bụ gị mbụ na-agbalị na ị chọrọ ime ka njikọ ikuku, ị kwesịrị ị wụnye .apk faịlụ aka. The akụkụ n'okpuru mbak ị 3 mfe ụzọ ibudata na ịwụnye MobileGo.apk faịlụ na gị android ngwaọrụ.
Ngwọta 1. Iji QR Usoro nyocha ka iṅomi na Download MobileGo.apk Njikwa
Ngwọta 2. Kpọmkwem Download MobileGo.apk File na gị Android
Ngwọta 3. Open Google Play na Android ka Download MobileGo.apk File
Ngwọta 1. Iji QR Usoro nyocha ka iṅomi na Download MobileGo.apk File
Kpatụ QR Usoro nyocha na gị android ngwaọrụ. Wụnye QR Usoro nyocha ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na ya.
Iṅomi QR Usoro na nri.
Mgbe scanning na-agwụ agwụ, na MobileGo.apk faịlụ ga-ebudatara gị Android ngwaọrụ.
Akwatukwa ngosi Center na enweta na ebudatara MobileGo.apk faịlụ. Soro onye-ihuenyo ngwá wụnye ya na gị Android ngwaọrụ.
Mgbe iwepu, ị nwere ike iji Wondershare MobileGo n'elu WiFi.
Cheta na: Tupu wụnye MobileGo.apk faịlụ, jide n'aka na ị ịkanyere Setting> Nche> Unknown isi mmalite na gị android ngwaọrụ.
Mepee nchọgharị na gị android ngwaọrụ.
The MobileGo.apk faịlụ ga-akpaghị aka ebudatara gị Android ngwaọrụ.
Gaa na ngosi Center na mgbata MobileGo.apk faịlụ iji wụnye ya na gị na Android ngwaọrụ. Ịmụta otú eji MobileGo site WiFi >>
Cheta na: Tupu wụnye MobileGo.apk faịlụ, ị kwesịrị ị na ego Setting> Nche> Unknown isi mmalite na gị android ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-agụ peeji a na gị android ngwaọrụ, ị nwekwara ike ozugbo enweta na Download APK bọtịnụ n'okpuru ibudata na ịwụnye MobileGo.apk faịlụ gị Android ngwaọrụ. Mgbe ahụ, ịkwatu ngosi Center na enweta na ebudatara MobileGo.apk faịlụ iji wụnye ya.
Ò Google Play ngwa arụnyere na gị na Android ngwaọrụ? Dị nnọọ na-eje ije site na nzọụkwụ ibudata MobileGo.apk faịlụ site Google Play.
Enweta Google Play Echekwala na ngwa na gị android ngwaọrụ.
Kpatụ magnifier icon na-abanye na MobileGo na search igbe.
Na search N'ihi ya, enweta MobileGo na-ewetara gị MobileGo.apk nbudata ihuenyo.
Enweta NA-ibudata na ịwụnye MobileGo.apk faịlụ gị Android ngwaọrụ. Lee otú eji MobileGo site WiFi >>
Type ihichapụ data na gị android ngwaọrụ, dị ka ozi, kọntaktị na foto? Jiri ya nwayọọ. The Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) (Windows) abịa maka gị. Ọ bụ ụwa 1st Android ngwaọrụ data mgbake omume, na-enyere gị naghachi kọntaktị, ozi, video, photos, ọdịyo na akwụkwọ na gị android ngwaọrụ.
Download desktọọpụ Dr.Fone for Android software ebe a.